Archive du 20181017
Baolina kitra Malagasy Nanoratra ny tantara ny BAREA
Ela ny ela ka tafita hiatrika ny lalao CAN ihany ny ekipam-pirenena Malagasin’ny taranja baolina kitra “Barean’i Madagasikara”, izay mendrika azy ireo tokoa araka ny efa notaterina teto amin’ny gazety Tia Tanindrazana ny alatsinainy 15 oktobra lasa teo noho ny ezaka goavana azo tsapain-tanana natao.
Fivorian’ny Antenimieram-pirenena Nangingina ny teny Tsimbazaza
Banbangoana ny sezan`ireo depiote teny Tsimbazaza nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa omaly. 20 izy ireo no tonga nanatrika ny fanokafana ny andro voalohany.
Fiatrehana fifidianana Mizara ho karazany enina ny mpifidy
Tena ao anatin`ny fampielezan-kevitra tanteraka isika amin`izao ary samy mampiasa ny fahafahana ananany na fahefana na fitaovana na vola ireo kandidà. Hatreto, miavaka ireo kandidà matanjaka izay mitifitra hatrany ireo tanàn-dehibe na faritra na distrika io.
Fanonganam-panjakana 2009 Tsy tokony hohamarinina intsony, hoy ny mpahay politika
Mandalo eto an-tanindrazana amin’izao ny mpahay politika na « politologue », Samuel Benjamin, malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina.
Fananganana Fanjakana Nosamborina i Pety Rakotoniaina…
Nosamborin’ny mpitandro ny filaminana tany Camp Robin any amin’iny lalam-pirenena faha-7 mihazo an’i Fianarantsoa iny omaly tokony ho tamin’ny 4 ora hariva i Pety Rakotoniaina, iray amin’ireo mpitarika ny vovonana politika HFI, na ny hetsiky ny Fanorenana Ifotony.
Fanarenam-pirenena Ravalomanana no mahavita an’io
Fotoan-dehibe ho an’ny firenena Malagasy ny fifidianana filoham-pirenena, ary tsy afaka manao fahadisoana intsony isika, raha mbola te hanavotra firenena sy hivoaka amin’izao fahantrana lalina izao.
Adihevitra propagandy Hampihaona ireo kandida 36 ny FES
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny FES (Friederich Ebert Stiftung) amin’ny fanampiana ireo kandida hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena amin’ny 7 novambra ho avy izao sy ny fanentanana ireo olom-pirenena feno 18 taona rehetra.
Soa fa nisy anao ry Jean !
Arahabaina aloha fa mba nitondra fifaliana goavana tamin’ity tontolo andro ity ianao ry Jean a !
Mpisandoka ho mpanao gazety Nisoloky minisitra teo aloha
Efa ela no nampikolay ireo mpanao gazety ny afitsoky ny tovolahy iray misandoka mpanao gazety amina onjam-peo iray tsy misy fampahalalam-baovao akory.
Asa mendrika eto Madagasikara Fanatsarana no mbola tokony atao
Misy fifandraisana ny olana ara-toekaren’ny firenena sy ny sehatry ny asa. Ny fampandrosoan’ny fampananan’asa feno (plein emploi), ny fampananana asa mamokatra (emploi productif) ary ny fampananana asa mendrika dia hitarafana ny fahatanjahan’ny firenena.
Rivo Rakotovao teny Vontovorona Nosiatsiahan’ny mpankafy ny Barea
Nitodika tetsy amin’ny Kianjan’i Vontovorona ny saina sy mason’ny maro omaly noho ilay lalao goavana natrehan’ny Barean’i Madagasikara, ekipam-pirenena Malagasy,
Madagasikara tafita ho any Cameroun
Nilaza ny heviny i Dupuis mpanazatra sy Ima kapiteny ary i Gothlieb Hevitry ny olona 3 teny Vontovorona ihany no atolotra anao amin’izao fahatafitan’ny Barea hiatrika ny CAN andiany faha-32 izao.
Karate Analamanga Nanjakan’ny seksiona Antananarivo Renivohitra
Nanjakan’ny seksiona Antananarivo Renivohitra izay nahazo medaly volamena 10 tamin’ny ankapobeny ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’Antananarivo Renivohitra, notontosaina tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina tamin’ny alahady 14 oktobra teo,
Ny vokatra azo no hifampitsarana
Manakoako eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao ny akon’ny fandresen’ny Barean’i Madagasikara sambany tafita hiatraka ny dingana famaranana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika amin’ny taona 2019.
Fanadinana enim-bolana faharoa CNTEMAD Mpianatra 18.000 no hiatrika izany
Mpianatry ny sekolim-panjakana Cntemad miisa 18.000 no hiatrika ny fanadinana enim-bolana faharoa ny 22 ka hatramin’ny 26 oktobra ho avy izao manerana ny Nosy.
Fampandoavan-ketra eto Madagasikara Mbola ilana ezaka be
Mbola tena sarotra ny asa fampandoavan-ketra manerana an’i Afrika ary hita taratra izany eto Madagasikara. Raha ny eto amin’ny firenena Malagasy manokana dia tsy mbola ampy ny serasera sy ny fanentanana amin’ny fampandoavan-ketra, indrindra ny any amin’ny tontolo ambanivohitra.
Fanjifana boky eto Madagasikara Nihena hatrany amin’ny 10 %
Nihena hatrany amin’ny 10 % ny fanjifana ireo boky hamidy eny anivon’ny trano fivarotam-boky eto amintsika raha oharina tamin’ny taon-dasa.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Basy miisa 846 nopotehina tetsy Analakely
Dingana ho amin’ny firosoana amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana no antony namotehana ampahibemaso ireo basy miisa 846 tetsy Analakely nandritry ny fankalazana ny iray volan’ny famotsoran-keloka amin’ny fahazoam-basy tsy ara-dalàna omaly,
Nahatsikaiky ny fanapotehana ireo basy miisa 846 tetsy Analakely. Ny antony dia satria nohitsahina tamin’ny trakitera ireo fitaovam-piadiana ary zara raha simba.
Tsy miova ny fomba fanao politika dinozoro eto Madagasikara fa dia mbola mitohy amin’ny fombana manambola sy mpanao fafikatrana vola hatrany.
“Tanora Manova Rasa” Hiaro ireo 90 %-n’ny Malagasy mahantra
Namoaka ny andiany voalohany ny Tanora Manova Rasa ( TMR) izay miara-miasa akaiky amin’ny “Friederich Ebert Stiftung”.
Asa fampandrosoana ny firenena Azo tsapain-tanana tamin’ny fitondrana Ravalomanana
Salama sy marin-toerana ny toekarena teto Madagasikara raha tsy nisy ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009.
Tetibolam- panjakana 2019 Hitentina 9 014 miliara ariary ny fandaniana
Tolo-dalàna iray sy volavolan-dalàna valo no vonona hodinihana eny amin’ny Antenimieram-pirenena ka efatra amin`ireo no vary mangatsiaka.